Wararka Dibadda – Page 13 – Shabakadda Amiirnuur
Markii ugu horraysay dowladda Sacuudiga ayaa ogolaatay in Kaniisado ay leeyihiin dadka Kirishtaanka ah laga dhiso dhulka Xarameynka. Kadib booqashooyin ay magaalada Riyaadh ku tageen Baadariyaal katirsan Vatican-ka ayay kulamo kula qaateen mas’uuliyiinta ugu sarraysa Sacuudiga oo uu kamid yahay Salmaan Bin C/casiis iyo wiilkiisa waxayna labada dhinac kala saxiixdeen […]
Uncategorized Wararka Dibadda
Trump oo Sheegay Inaaney Dowladaha Carabta Todobaad Jiri Karin Mareykanka La’aantii.
Madaxweynaha dalka Mareyka Donel Trump, ayaa si aad ah u liiday mar kale madaxda xukaamta carabta xilli uu shir jaraa’id ku qabanayay dalka Faransiiska. Shirkiisan jaraa’id oo ahaa mid uu ku wehliyo ra’iisulwasaaraha dalka Faransiiska, ayaa waxa uu si cad ugu sheegay in dowladaha carabtu yihiin kuwa ku dhisan Mareykanka awoodiisa. […]
Faransiiska oo Qabanaya Shir Ka Dhan Ah Xawaaladaha Muslimiinta Caalamka.
Dalka Faransiiska, ayaa wuxuu maanta oo Talaado, ah marti galinayaa shir caalami ah oo ujeedadiisu tahay sidii culeys loo saari lahaa xawaaladaha muslimiinta, gaar ahaan lacagaha loo diro dalalka islaamka. Shirkan oo loogu magac daray “La dagaalanka maal galinta argagixisada” ayaa waxaa la qorsheeyay inuu socdo muddo laba maalmood ah, […]
Sawirro: 10 Qof oo Lagu Dilay Weerar Gaari Jiirsiin Ah oo Ka Dhacay Kanada.
Ugu yaraan 10 qof ayaa geeriyootay 15 kalana waa ay dhaawacmeen kaddib markii nin gaari waday uu jiirsiiyay dad muwaadiniin ah oo marayay meel waddo ah oo ku taalla magaalada Toronto ee caasimadda dalka Canada. Ciidamada Booliska ee magaaladaas ayaa sheegay in ninka weerarka geystay ay xabsiga dhigeen islamarkaana ay […]
Maraykanka oo Qiray in kudhowaad 10 Askari ay uga dhimatay burbur diyaaradeed oo ka dhacay dalka Ciraaq.
Gelinkii dambe ee maalintii Jimcaha waxaa gobolka Al-Anbaar ee wadanka Ciraaq ku burburay mid kamid ah diyaaradaha dagaalka ee dowladda Maraykanka ee dalkaas ka wada duqeymaha cadowtooyo ee ka dhanka ah dadka Muslimiinta. Diyaaradan soo dhacday oo nooceedu ahaa Hellecopter waxay dowladda Maraykanka sheegeysaa in burburkeeda uu ahaa mid dabiici […]
50 Qof Oo Ku Dhimatay Diyaarad Ku Burburtay Wadanka Nepal.
Tobanaan qof ayaa ku dhimatay shil diyaaradeed oo ka dhacay magaalada caasimadda u ah wadanka Nepal ee dhaca bartamaha qaaradda Asia. Ugu yaraan 50 qof oo rakaab ah ayaa ku dhintay burbur diyaaradeed oo ka dhacay garoonka diyaaradaha caalamiga magaalada Kathmandu ee caasimadda wadanka Nepal. War rasmi ah oo kasoo […]
Khabiir Ameerikaan Ah oo Lagu Dilay Dalka Kenya.
Booliska Kenya ayaa sheegaya in kooxo aan heybtooda lagaran ay dileen Nin khabiir Mareykan ah oo caan ka ahaa gudaha wadanka Kenya iyo wadamada geeska qaaradda Afrika. MeydkaEsmond Bradley Martinoo American ah ayaa laga helay gurigiisa oo kuyaal dacalka magaalada Nairobi ee caasimadda u ah Kenya. Saraakiisha ammaanka ayaa sheegaya […]
Madaxweynaha Ereteria Oo Socdaal Ku Jooga Wadanka Masar iyo Xiisado Udhaxeeya Dowladaha Geeska Afrika.
Wakaaladda Wararka Sharqal Awsat ee ku dhow xukuumadda Masar iyo Telefeshinka Rasmiga ah ee wadankaas ayaa faafiyay muuqaalka Cabdi Fataax Alsiisi oo madaxweynaha Ereteria kusoo dhoweynaya magaalada caasimadda ah ee Al Qaahira. Booqasho kedis ah ayuu Hoggaamiyaha Ereteria ku joogaa wadanka Masar halkaas oo kulamo lagu sheegay xasaasi kula yeelanayaan […]
Dowladda Masar oo Magaalada Qudus U Aqoonsatay Caasimadda Yahuuda.
Soddon maalmood ayaa laga joogaa markii Donald trump hogaamiyaha dowladda Mareykanka uu ku dhawaaqay in magaalada Qudus uu u aqoonsaday Caasimadda Yahuudda sa arrinkaas oo caro daran ku abuuray malaayiin qof muslimiim ah oo caalamka daafihiisa ku dhaqan. Warbixin cusub oo lahelay ayaa banaanka soo dhigaysa in dowladda masar oo […]
Buugga uu qoray Michael Wolff ayaa lagu sheegay in Trump uu muujinayo astaamo kasii daraya oo ku saabsan in uusan maskax ahaan fiyoobeen. Buugaag kale oo baddan oo laga qoray caafimaadka maskaxda Trump waxaa ka mid ah The Dangerous Case of Donald Trump oo uu qoray Bandy X Lee; Twilight […]